विकासको पूर्वाधारले मात्रै समृद्धी आउँदैन – अमान सीँ तामाङ , मेयर चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका - लोकप्रिय समाचार
विकासको पूर्वाधारले मात्रै समृद्धी आउँदैन – अमान सीँ तामाङ , मेयर चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार by लोकप्रिय समाचार
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अबस्था कस्तो रहेको छ र विकासका कामहरु के कस्ता भैरहेका छन् । बिशेषगरी , शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषी क्षेत्रमा नगरपालिकामा के– के काम भैरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रीत रही सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको मेयर अमान सीँ तामाङसँग लोकप्रिय समाचारले गरेको कुराकानी –
१) पछील्लो समय चौतारा नगरपालिकाले विकास निर्माणका सवालका कुन– कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
नम्बर एकमा मैले नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आईसकेपछी पूननिर्माणलाई जोड दिएको थिए । नम्बर दुईमा काठको पोल मुक्त गर्ने अभियानमा लागे । त्यसका साथसाथै नगरका प्रत्येक वडाको वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे बनाउने अभियानमा जुटे । आयमुलका कार्यक्रमहरु , नगरका भित्री बाटोहरु स्तरोन्नती गर्ने कामहरु , नगरपालिकाको कार्यालय , वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय बनाउने काममा जोड दिए । गौरबका योजनाहरु बनाउने कामहरुमा जोड दिए । भूकम्पले टहरोमा बस्न बाध्य जनतालाई घरमा लैजान सफल भएका छौँ । अहिलेसम्म पूननिर्माणको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । कालोपत्रे प्रत्येक वडामा गर्ने अभियान अन्र्तगत ३ र २ नम्बर वडाबाहेक अन्य ठाउँमा सफल भएको छ । यसबाहेक शिक्षका कामहरु लाई अघी बढाएका छौ । निशुल्क शिक्षादेखी लिएर पुराना शिक्षकहरलाई गोल्डेन ह्यान्ड चेकको ब्यवस्था गरेका छौ । १४ वटै वडामा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवनहरुको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकामा पुननिर्माणको काम सिद्धिसकेको छ । त्यसैगरी पशु र कृषीको कार्यक्रममा चाँही आयमूलक कार्यक्रहरुलाई जोड दिएका छौ । भैसी पालन गर्ने किसानहरुलाई अनुदानको ब्यवस्था गरेका छौँ । जस्तै ५ वटाभन्दा बढी भैसी पालन गर्ने किसानलाई १ लाख अनुदानको ब्यवस्था गरिएको छ । यसका साथसाथै थोरे भैसी पाल्ने विपन्न वर्गका किसानहरुलाई ८० प्रतिशत अनुदान दिएर २० प्रतिशत मात्रै किसानले लगानी गरे हुन्छ । विपन्न महिलाहरुका लागी बाख्रालन , कुखुरापालन, बुँगुरपालनका लागी अनुदानको ब्यवस्था गरेका छौँ । यसबाहेक गलैँचा बुन्ने सपि भएको गाउँका लागी एक घर एक गलैँचा तानको ब्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ ।
२) तपाईको अनुभबमा नगरको विकास केलाई मान्नुहुन्छ ?
नगरपालिकाले पूर्वाधारको काम त गर्नुपर्छ तर पूर्वाधारको काम मात्रै गरेर हुदो रहेनछ । जनताको घरमा कालोपत्रे छ तर त्यो चिल्लो पिचमा गाडी आउँछ तर गाडीभाँडा तिर्ने पैसा छैन भने त्यसलाई विकास भन्न नहुने रैछ । आँगनमा पानीको धारा छ तर त्यो पानीमा मिसाउने चामल, पिठो छैन भने त्यो पनी विकास हैन रहेछ । त्यसका साथसाथै घरमा बिजुली बत्ती झलमल्ल छ तर त्यो पनी बिकास हैन रहेछ । माथी उल्लेख गरेका सबै विकास त हो तर त्यतिले मात्रै नपुग्दो रहेछ अपुरो हुने रहेछ । त्यसैले विभिन्न किसिमका अनुदानहरुको ब्यवस्था गरेका छौँ । नगरपालिकाको वडा नं. ५ र ११ मा तरकारी सँकलन केन्द्रको ब्यवस्था गरेका छौँ । किसानहरुले तरकारी उत्पादन गरेर आयआर्जन बढाउन सकुन् भन्ने उदेश्यले तरकारी सँकलन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी कुहिएर खेर जाने छैन सबै नगरपालिकाले लिनेछ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनतासँग डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ । आफुलाई लागेका रोगहरु किसानहरुले बेलुका फोन गरेर सोध्न पाईने, सल्लाह गर्न पाईने जनतासँग जनता कार्यक्रम ल्याएका छौ । सुत्केरी हुन बर्थीङ सेन्टरसम्म आउने गर्भवतीहरुको आउने जाने गाँडीभाँडा नगरले ब्यहोरिरहेको छ । नगरपालिकाको नितिभित्र बसेर बर्थीङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई कुखुरा उपहार पनी दिने गरेका छौं । हामीले जनतासँग मेयर कार्यक्रम पनी गरिरहेका छौँ । अहिले म रातदिन हरेक बस्तीबस्तीमा तेही जनतासँग मेयर कार्यक्रममा खटिरहेको छु । यसरी जनताको घरदैलोमा पुगेर नगरले गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रम कतीका प्रभावकारी भएका छन् प्रत्यक्ष अबलोकन गर्न सकिने रहेछ । जनताको घरदैलोमै गएर जनताका समस्या अबलोकन गरी सामान्य २० मिटर पाईप नभएर खानेपानी समस्या भोगेका जनता हुन् या सिँचाई नभएर खेत सुकेर बसेको जनताहरुको समस्या समाधानका लागी ५० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छु । त्यसैगरी किरीयापुत्री भेट्ने काम रु. ५ हजार दिएर । नगरभित्रका प्रत्येक किरीयापुत्री भेट्न म आफै पुग्ने गरेको छु । एउटा ठुलोबडा, धनीमानी , बुद्धीजिवीहरुको घरमा किरीयापुत्री भेट्न जाँदाखेरी ओहो नगरपालिकाले हामीलाई सम्झीएर आयो भन्ने पर्दोरहेछ भने सानो गरीबको घरमा पर्दा चाँही नगरपालिकाले हामीजस्तो गरिबलाई पनी हेरिराको रछ, देखिराको रछ भन्ने त्यो गरिवलाई पर्दोरहेछ । त्यसैले म किरीयापुत्री भेट्ने काममा पनी ब्यस्त छु ।
३) नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको कामचाँही कसरी अगाढी बढाईरहेको छ , जनतालाई कोरोनाको बेलामा कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुभयो ?
कोरोनाको समयमा विभिन्न किसिमको सन्देश सहित प्रचारप्रसार गर्ने काम देखी दिएर गाउँगाउँमा कोरोना नियन्त्रणका लागी समिती गठन गरेर आईसोलेसन कक्षको निमार्ण गरियो ।गाउँमा गएर कोरोना परिक्षण गर्ने कामहरु गरियो । त्यसका साँथसाथै गाउँगाउँमा औषधी उपचार गर्ने काम गरियो । कोरोना लागेका ब्यक्तीहरुलाई आइसोलेसनमा राखीयो । क्यारेन्टाईनको निर्माण गरियो । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरियो । अक्सीजनका सिलीन्डरहरु भरेर अस्पतालमा ब्यवस्थापन गरेका छौँ । कुनै पनी कोरोनकाो विषयमा नगरपालिकाले कन्जुस्याई गरेको छैन ।
४) तपाईले यसअघी जनतासँग डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यो कार्यक्रम प्रभाबकारी भएको छ त भन्नुभयो तर जनताहरु चौतारा अस्पतालमा सेवा लिदा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् , यसमा प्रष्ट पारिदिनुस न ?
त्यो अस्पताल नगरको अन्र्तगत नहुँदो रछ । हामी त प्रदेशको हो, नगर अन्र्तगत बस्दैनौ भन्छन् । हामीले त पटक– पटक दबाव दिएका छौँ । मैले त यदी नगरपालीका मातहतमा बस्दैनौ भने या नगरपालिकाको सल्लाह सुझाब नमान्ने हो भने तपाईहरु प्रदेशमै जानुस सम्म भनेको छु । भन्नेबेलामा प्रदेशको भन्ने काम गर्नेबेलामा नगरको मातहतमा बसेर काम नगर्दा नगरले निशुल्क उपचार गर भन्दा पनी नटेरेको अबस्था छ ।
५) नगरपालिकाले गौरबका योजनाहरु कुन– कुन सञ्चालन गरेको छ ?
नगरपालीकाले गौरबका योजनाहरु सञ्चालन गरेको चाँही बुद्धपार्क , साँगाचोकगढी ईर्खुको रानीपोखरी निर्माण गरिरहेका छौ । त्यसैगरी प्रत्येक शुक्रबार हजाँरौ पर्यटकहरु सुकुटे आउँछन् । सुकुटेमा आउने पर्यटकलाई एक दुई दिनसम्म अल्मल्याउने कोसीसमा म लागिरहेको छु । आज त्यो सुकुटेमा आउने पर्यटकहरुलाई साँगाचोकगढीको अबलोकन गराउने , साँगाचोकगढीको अवलोकन गरिसकेपछी ईर्खुको रानीपोखरी अबलोकन गर्ने कदमबास गएर प्याराग्लाईडिङ गराउने र चौतारा आएर नारायणथान, भुतछाँगा, चौताराको महाविद्यालय , मिनीरँगशाला , भूकम्पपार्क, बुद्धपार्क अबलोकन गर्दै गौराती भिमेश्वरको दर्शन गराउने र स्याउलेको हर्लाङ बर्लाङ र चमेरो गुफा हुँदै ओखरेनीको चियाबगानसम्म पर्यटक घुमाएर अल्मल्याउने कोशीस गरिरहेका छौँ । त्यसैका पूर्वाधारको लागी दुरसञ्चार माथी ४ करोड १७ लाखको सिढी निर्माण गरिरहेका छौँ । बुद्धपार्कको ७ करोडको टेन्डर भैसकेको छ । मिनिरँगशाला निर्माण भैरहेको छ ।
६) निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरा भए जस्तो लाग्छ कि, अझै पुरा हुन बाँकी नै छ ?
पुरा त कहाँ हुनु । पुरा त जती समस्या आउँछन् त्यसलाई समाधान गर्दै लैजाने त हो । जती सिध्याउछु भनेनि सिद्धिदैन । जति बोलेको थिए , हाम्रो नगरलाई समृद्ध नगर बनाउँछु भनेर समृद्ध भनेको बोलेको जस्तो हैन रहेछ । समृद्धिलाई त के– के चाहिने चाहिने रछ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारदेखी लिएर धेरै चिज चाहिरे रहेछ । भएका सबै पुराना चिजनै फेर्नुपर्ने रहेछ समृद्धिको लागी त्यसैले समृद्ध नगर बनाउन त लागेको छु तर पुरा भने भाको छैन । त्यसैको जगमा टेकेर समृद्ध नगर बनाउने अभियानमा छु ।
७) भूकम्पमा ध्वस्त भएका विद्यालय भवनहरुको पूननिर्माणको अवस्था चाँही कस्तो छ ?
विद्यालय पूननिर्माणको काम सकिसककेको छ । एक ÷दुई वटा साना– साना विद्यालय मात्र्र बाँकी छन् । तिनिहरुको पनी निर्माण भैरहेको छ ।
८) अन्तमा सोध्न विर्सेका भन्नै पर्ने केही छन् की ?
समग्र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको स्थानिय जनताहरुलाई जुन हाम्रो टिमले गरेको कामहरुको लोकप्रिय समाचारबाट जानकारी दिने अबसर दिएकोमा पत्रिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
Prevवाग्मतीको मुख्यमन्त्री शाक्यले दिनुभयो राजीनामा
Nextचौतारामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय स्थापना